Saafi Films - News: Daawo Muuqaalka: Daawada Cudurka AIDS-ka Oo La Helay
Daawo Muuqaalka: Daawada Cudurka AIDS-ka Oo La Helay
Saynisyahanada ayaa ku dhaw inay heelaan daawada rasmiga ah ee cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka, cunug yar oo ku dhashay isagoo qaba cudurkaasi ayaa lagu daaweeyay dalka Mareykanka.
Dhaqaatiirta magaalada Atlanta ee wadanka Mareykanka ayaa sheegay inay daaweeyeen cunug 2 iyo bar sano jir ah oo cudurkaasi ku dhashay. Culumada sayniska ayaa xaqiijiayay wiilkaas inuu ka buskooday cudurkaasi waxayna kulan ka yeelanayaan daawadaas la helay. Dhaqaatiirta ayaa sheegay daawaadsi hada la helay inaysan u shaqaynayay dadka waa weyn waayo virus-ka waxaa uu mar hore ku fiday xididadooda iyo dhiigooda.
Cunugaan yar ayaa noqonayaa kii oogu horeeyay ee ku dhasha isagoo qaba AIDS-ka oo ka buskooda inta la ogayahay.
Tirada caruurta ku dhalata iyagoo qaba cudurka AIDS-ka ayaa aad hoos oogu dhacday kadib markii haweenka cudurkaasi qaba ee uurka leh la siiyay daawoyinka ka hortaga inay ku daartaan ilmahooda caloosha ku jira.
samira on March 06 2013 ·
4,527,004 unique visits